अक्षय कुमारले मुम्बई प्रहरीलाई दिए २ करोड सहयोग access_timeबैशाख १६, २०७७
एजेन्सी : बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले मुम्बई प्रहरीलाई २ करोड भारतीय रुपियाँ सहयोग गरेका छन् । उनले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि २५ करोड भारतीय रुपियाँ सहयोग गरेका थिए । साथै, महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्री राहत कोषमा पनि सहयोग गरेका थिए । अक्षयलाई धन्...
पत्नी ट्विङ्कल खन्नाले साँच्चै २५ करोड राहत कोषमा दिने हो ? भन्ने प्रश्नमा अक्षयले दिए यस्तो जवाफ access_timeचैत १८, २०७६
एजेन्सी : कोरोना भाइरससँग लड्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्थापना गरेको राहत कोषमा बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले २५ करोड भारु सहयोग गरे । २१ दिने लामो लकडाउनमा रहेको भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध लड्न राहत कोषमा सकेको सहयोग गर्न अपिल गरिएको ...
अक्षकुमारको पारिश्रमिक १२० करोड ! access_timeमाघ ७, २०७६
मुम्बई – बलिउड अभिनेता अक्षयकुमार पछिल्लो समयका निकै व्यस्त छन् । अन्य सुपरस्टार वर्षमा एक फिल्म दिन सफल छन् । तर उनले वर्षमा ३ वा ४ फिल्म दिने गरेका छन् । त्यो पनि सुपर हिट । गतवर्ष अर्थात २०१९को कुरा गर्ने हो भने उनी बलिउडको सबैभन्दा बढी कमाउने अभिनेता स...
अक्षय कुमारले खुलाए क्यानाडाको पासपोर्ट लिनुको कारण access_timeमंसिर २१, २०७६
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले आफूले भारतीय पासपोर्टको लागि आवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् । भारतीय संचारगृह हिन्दूस्तान टाइम्सको आयोजनामा भएको नेतृत्व समिटमा शुक्रबार अक्षयले यसको जानकारी दिएका हुन् । त्यस क्रममा उनले पटक पटक आफूसँग राष्ट्रिय...
सर्वत्र विवादपछि अक्षय कुमारले दिए भारतीय पासपोर्टको लागि आवेदन access_timeमंसिर २१, २०७६
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले क्यानेडियन नागरिकता त्यागेर भारतीय पासपोर्टको लागि आवेदन दिएका छन् । उनले सर्वत्र विरोधपछि भारतीय पासपोर्टको लागि आवेदन दिएका हुन् । उनले शुक्रबार हिन्दुस्तान टाइम्सको एक कार्यक्रमकाबीच बोल्दै कसैले राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउँदा निकै ...
बिहारका २५ बाढी पीडित परिवारलाई अक्षय कुमारले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने access_timeकात्तिक १३, २०७६
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले बिहारमा आएको बाढीबाट प्रभावित २५ परिवारलाई एक करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । पीडित परिवारलाई छट पूजाको दौरान चेकको रुपमा हस्तान्तरण गरिनेछ । पीडित परिवारलाई ४–४ लाख रुपैयाँ चेकबाट हस्तान्तरण गरिन...
१८ दिनसम्म लगातार ९०० किमी हिँडेर अक्षय कुमारलाई भेट्न पुगे एक फ्यान access_timeभदौ १७, २०७६
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले आइतबार आफ्नो एक जना फ्यानको भिडियो र तस्विर सामाजिक संजालमा शेयर गरे । प्रभात नामका ती फ्यान अक्षय कुमारलाई भेट्नको लागि १८ दिन लगाएर ९०० किमी पैदल हिँडेर मुम्बई पुगेका थिए । अक्षयले भिडियो शेयर गर्दै लेखेका ...
अक्षय कुमार सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने अभिनेताको चौथो सूचीमा access_timeभदौ ५, २०७६
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार विश्वका सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउने अभिनेताको चौथो स्थानमा परेका छन् । फोर्ब्स डट कमका अनुसार अक्षय कुमारले ६.५ करोड अमेरिकी डलर कमाइ गरेर चौथो स्थान हासिल गरेका हुन् । सूचीको लागि फोब्र्सले सन् २०१८ जुन १ देखि सन् २०१९ ...